Chocolate Chip Cookie | Colourful Recipes
ချောကလက် ကွတ်ကီး အတွက် ….
ထောပတ် – 1 cup
သကြား ( အဖြူ ) – 1/2 cup
သကြား ( အညို ) – 1 cup
ဆား – 1/2 tsp
chocolate chip –2cups
သကြား အညို ဖြင့် ပြုလုပ်သော ကိတ်ခြောက် ပုံစံ ၊ မုန့်အ၀ိုင်း လုပ်နည်း အညွန်း
ဒီတခေါက် ၀ယ်သော ဂျုံမှုန့် အထုပ် ….
ချိစ် ပေါင်မုန့် ချက်ပုံ ချက်နည်း အညွှန်း …
ဂျုံမှုန့် ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သော မုန့် အမျိုးမျိုး
အရင်ဦးဆုံး oven ကို 375ºF ကြိုဖွင့်ထားလိုက်ပါ။
မွှေမယ့် ကြွေဇလုံထဲ …
ထောပတ် – အရည် – ၁ ခွက် ထည့်
သကြား (အဖြူ ) – ၁/၂ ခွက်
သကြား ( အညို ) – ၁ ခွက်
ဗယ်နီလာ အမွှေးနံသာ – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ဂျုံမှုန့် – ၃ ခွက် ထည့်မွှေပီးနောက် …
ချောကလက် – ၂ခွက် ထည့်ပီး ရောမွှေထားလိုက်ပါ။
TBS – ထမင်းစားဇွန်း ပမာဏ ဇွန်းနဲ့ ကွတ်ကီး မုန့်နှစ်တွေ ခပ်ပီး ကွတ်ကီး မုန့်ဖုတ်တဲ့ စကူ (paper) ပေါ်မှာ ၁ လက်မခွဲ အကွာစီ နေရာချပေးထားလိုက်ပါ။
ခပ်ကြီးကြီး ကွတ်ကီးတွေကိုတော့ ရေခဲမုန့် ခပ်တဲ့ ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပီး တစ်လက်မခွဲ အကွာ စီ နေရာ ချပေးထားလိုက်ပါ ….
ဇွန်းနဲ့ ခပ်တဲ့ အခါ အောက်ခြေနားမှာ ချောကလက်လေးတွေ စုနေတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒါမှ ကွတ်ကီး မုန့် ဖုတ်ပီးတဲ့ အခါမှာ ချောကလက်လေးတွေက ကွတ်ကီး မုန့်ချပ်ပေါ်မှာ ပေါ်နေမှာ …
ကြိုဖွင့်ထားပီး .. ပူနေတဲ့ oven ထဲ မုန့်ဗန်းကို ထည့်ပီး
375ºF – ( 13 minutes ~ 15 minutes )
oven ထဲကနေ ဖုတ်ပီးသား ကွတ်ကီးမုန့်တွေကို အပြင်မှာ ၃ မိနစ် ~ ၅ မိနစ် ထိ အအေးခံပီးရင် … စားလို့ ရပါပီ ….
ကွတ်ကီး မုန့်ချပ်ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ ချောကလက်လေးတွေနဲ့ ကွတ်ကီးမုန့်ထဲမှာ မြုပ်နေတဲ့ ချောကလက် လေးတွေ …
လူကြီးများ အတွက် ချောကလက် ကွတ်ကီး ကြီးကြီးလေး နှင့် ချောကလက် များများလေး
ရေခဲမုန့် ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပီး ကွတ်ကီး မုန့်ဖုတ်ထားတာမို့ ကွတ်ကီး မုန့် ခပ်ကြီးကြီး အနေအထား …
အိမ်က ကလေးများက အရမ်းကြိုက်တယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကွတ်ကီးမုန့် ဖုတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ၀င်ကူညီပေးတယ်။
ကလေးတွေ လုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ် ရှိတုန်း … သူတို့ကို ကိုယ်တိုင် မုန့်ဖုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှ ချက်၊ ပြုပ်တဲ့ နေရာမှာ သူတို့ စိတ်ပါလာမှာပါ ….
ကလေးတွေက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဂျုံတွေနဲ့ အရုပ်လုပ်တာ … ဂျုံတွေကို ပြားပြားလေး လိမ့်တာ ဆော့နေကျဆိုတော့ …
ကွတ်ကီးမုန့်လောက်က သူတို့ ဆော့နေကျ ကစားနည်းလို ဖြစ်နေတယ်။
ဂျုံ ပုံစံခွက်တွေကလည်း ကွတ်ကီးမုန့်ဖုတ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ cookie cutter လေးတွေနဲ့ ပုံစံတူတယ်။
မနက်စာ ကော်ဖီ နှင့် တွဲစားဖို့ ချောကလက် ကွတ်ကီးလေးပါ ….
အိမ်က ကလေး ၂ယောက် ကတော့ အရမ်းကို ကြိုက်ပေါ့ …
သူတို့က ချောကလက် ပိုများတဲ့ ကွတ်ကီးကို ရွှေး စားနေကြပါတယ် ….
By Thet Nandar  Posted in Cake & Cookie Recipe, Cookie, Cooking Ingredients	 Tagged ချောကလက် ကွတ်ကီး, colourful recipes blog, Cookie, food
One comment on “Chocolate Chip Cookie”
August 22, 2012 @ 12:42 am
I want to eat Giant Chocolate Chip Cookie and they are perfect indeed. i love how you show all the steps. Thanks for your recipe. Can’t wait to get started.